Ikhaya » Iindaba zoMsebenzi woHamba » I-Carnival Cruise Line yeMardi Gras yenza i-US kuqala
IMardi Gras iza kuhamba ngomkhumbi unyaka wonke isuka ePort Canaveral, ibonelela ngeendlela zokuhamba zeentsuku ezisixhenxe kwimpuma nakwintshona yeCaribbean.
Izibuko leMardi Gras okokuqala ngqa ePort Canaveral's Cruise Terminal 3
I-Mardi Gras yinqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa kumazwe aseMelika ixhaswe yiGesi yeNdalo yeLiquified
IMardi Gras ineempawu zokuqala zokuhamba elwandle
KwiCarnival Cruise LineUMardi Gras, wamenza ukuba abonakale e-US ngale ntsasa, efika okokuqala ngqa ePort Canaveral's Cruise Terminal 3, eyakhelwe le nqanawa yeyokuqala eMelika inikwe amandla yi-Eco-friendly Liquified Natural Gas (LNG) i-roller coaster yokuqala elwandle.
IPort Canaveral esekwe kwi-Carnival Freedom kunye ne-Carnival Liberty yajoyina iMardi Gras njengoko yayisihla ijelo lokuhamba ngenqanawa, isenza indawo entle nenokukhumbuleka yokungena kule nqanawa intsha, etshintsha umdlalo.
Ngaphezulu kwe-1,500 abalandeli abakhe iJetty Park, ekufutshane nesiphelo, ukwamkela iMardi Gras ku-Space Coast, ngelixa Carnival UMongameli uChristine Duffy, uSihlalo weCarnival Corp. uMicky Arison, u-CEO weCarnival Corp. u-Arnold Donald, uCarnival Corporation COO uJosh Weinstein, kunye no-CEO weKanaveral Port Authority u-Captain John Murray, kunye nabacebisi ngezohambo abangama-300, amaqabane, izidwangube kunye neendwendwe, zithathe inxaxheba ekwamkeleni Ukuqaqambisa uchulumanco lokufika kukaMardi Gras kunye nefuthe lawo kuqoqosho lwasekhaya.
"IMardi Gras ineminyaka emihlanu isenziwa kwaye ukufika kwanamhlanje sisiganeko esibalulekileyo kwinkampani yethu ukuba singathethi ngomzuzu wokwenene kuwo wonke umntu olapha eCarnival Cruise Line," utshilo uDuffy. “Le nqanawa inikezela ngeendlela ezininzi ezintsha kunye neendlela zokukhetha iindwendwe zethu ukuba siqinisekile ukuba ngokukhawuleza iza kuba lundwendwe oluthandayo. Kwaye njengoko sijonge phambili ekuqalekeni kwimisebenzi yeendwendwe, ukufika kukaMardi Gras kungumfuziselo wovuyo kunye nolindelo esinalo ngekamva kwiCarnival Cruise Line. ”
"Phantse iminyaka emine sisebenza nzima ukulungiselela iMardi Gras," utshilo uKapt Murray. "Njengokuba samkela ekhaya le nqanawa intle kangaka isiya ePort Canaveral, sizaliswe likratshi lokumbona emi kwindawo yethu entle yokuHamba ngenqanawa yeenqanawa 3."
Inkampani ngoku izakuqala inkqubo yokunyusa inani labasebenzi beMardi Gras ukuya kwi-1,750 epheleleyo ekulungeleyo ukwenza iholide ezingalibalekiyo kwiindwendwe eziza kulonwabela uluhlu olubanzi lokuzonwabisa elwandle, kubandakanya nenguqulelo yokuqala yomdlalo weqonga kumabonwakude woHlolo loSapho. , kunye nokutya kwiindawo zokutyela ezingaphezulu kweshumi elinambini ezineendawo ezivela eGuy Fieri, e-Emeril Lagasse, eRudi Sodiman kunye neGosa eliyiNtloko loLonwabo uShaquille O'Neal.